Pamplona dia hanohana ny fanjifana tena amin'ny trano mahazatra | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Mampalahelo fa tsy mahazatra ny mahita programa fanampiana fanjifana tena photovoltaic Any amin'ny firenentsika. Izany no mahatonga ny vaovao fa hanangana fandraisana andraikitra ny filankevitry ny tanànan'i Pamplona handrisihana ny fanjifana tena amin'ny mponina ao Pamplona.
Ny filankevitry ny tanànan'ny renivohitra Navarran dia nanolotra ny Drafitr'asa momba ny angovo. Tetikasa izay hanana teti-bola 926.250 euro mikendry ny hamorona tanàna misy modely maharitra sy mahomby kokoa ary hampihena ny fiankinan-doha amin'ny tanàna.
1 Drafitr'asa momba ny angovo
1.1 Fandaniana tena
2 Tsy i Pamplona irery
3 Ny Vondrona eropeana dia nanery ny hanovana ny paradigma
Drafitr'asa momba ny angovo
Ny tanjon'ity programa ity dia ny hampirisika ny famokarana angovo azo havaozina amin'ny karazana trano, na miankina na ho an'ny daholobe. Miady amin'ny fahantrana amin'ny angovo ary mampihena ny angovo fitakiana angovo, hiezaka hampiroborobo ny fitsitsiana angovo sy ny fahombiazan'ny angovo.
Amin'ity drafitra ity dia azontsika atao ny manasongadina ny tanjony amin'ny fampitomboana ny fametrahana fotovoltaika ao an-trano sy any an-trano, ka hanolotra fanampiana ho an'ny fandaniam-tena ho an'ny trano tsy miankina.
Ny drafitr'asa momba ny angovo Pamplona dia manana Fepetra 22, ny drafitra mihitsy dia hanana fampiasam-bola 926.250 €, ary hovonoina mandritra ny taona manaraka.
Ny 5 amin'ireo fepetra 22 ireo dia ho fampiroboroboana ny fanjifana tena any an-tranon'olona manokana, hanomezana fotodrafitrasa sy fidirana mivantana mivantana amin'ny fametrahana ny tontonana photovoltaic, mba hiteraka herinaratra avy amin'ny taratra masoandro.
Ny tanjon'ireto fepetra 5 ireto dia ny hampihenana ny fitakiana angovo an'i Pamplona amin'ny tranobe manokana. Fa ny tena ampiroboroboana dia ny fanjifana tena fotovoltaika sy ny fitsitsiana angovo ao an-trano, ny safidy hivarotra ny angovo be loatra amin'ny takelaka dia tsy voadinika.
Para mandrisika fa ny olom-pirenena dia mampiasa vola amin'ny fametrahana photovoltaic ho an'ny fividianana tena, ny filankevitry ny tanàna dia hanolotra andalana fanampiana ho an'ny olona tsirairay.
Mbola tsy fantatr'izy ireo daholo ilay taratasy kely ny tetikasa, saingy eritreretina fa hatramin'ny 50% amin'ny fametrahana dia azo omena vola.
Ankoatr'izay, ny 7 amin'ireo fepetra 22 dia mifantoka amin'ny fitomboana angovo azo havaozina sy ny fividianana tena any Pamplona amin'ny tranobe monisipaly, raha jerena ny hevitra momba ny fividianana tena amin'ny trano ofisialy.
Ny hetsika iray hafa dia ny fanatsarana ny maodelin'ny angovo ary ahenao ny fangatahanao angovo ao an-tanàna, hoentina hampiroboroboana ny fanabeazana angovo ho an'ny olom-pireneny.
Ho an'izany, homena fihaonambe samihafa amin'ny tranobe monisipaly, sekoly, institiota ary oniversite. Ho fanampin'izany, atrikasa marobe no atao hanampy ampidino ny faktioran-jiro, fampiroboroboana ny tahiry ary fampahafantarana ny olan'ny tontolo iainana ankehitriny sy ho avy.
Tsy i Pamplona irery
Ny Cabildo de La Palma dia hanokana fanampiana 200.000 XNUMX euro ho an'ny fandaniam-tena Ny olona tsirairay dia tsy maintsy mametraka zavamaniry fotovoltaika kely ao an-tranony.
Tsy toy ny zava-mitranga any amin'ny tanibe Espana, ny fanampiana dia natao ho an'ny olona miloka amin'izany angovo azo havaozina miaraka amin'ny fahefana mitovy na latsaky ny 10 kW ny fahefana.
Raha ny marina, ny tanjon'ny fanampiana dia ny fanatanterahana tetikasa famokarana angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny rafitra tontonana photovoltaic ho an'ny fividianan-tena ataon'ireo trano ireo, miaraka fifandraisana amin'ny tamba-jotra ny fizarana, maniry ny hampihena ny fanjifana ary handray anjara amin'ny fitsitsiana angovo.
Ny minisitry ny fampiroboroboana ny toekarena, ny varotra, ny angovo ary ny indostrian'ny Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, dia manasongadina ny fotoana lehibe ananan'ireo fanomezana Natao ho an'ny fianakaviana rehetra mino ny angovo azo havaozina izy ireo, ary amin'izany dia manampy ny faharetan'ny nosy.
Ny Vondrona eropeana dia nanery ny hanovana ny paradigma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Pamplona dia hanohana ny fanjifana tena amin'ny trano mahazatra